Halkay Maraysaa Qaban-qaabadii koobka Gobolada S/Land?
HomeWararka MaantaHalkay Maraysaa Qaban-qaabadii koobka Gobolada S/Land?
Gud.Xidhiidhka Ciyaaraha S/Land Oo Kawaramay Halka Ay Marayso Qaban-Qaabada Koobka Gobolada JSL
Waxa dhawaan ay wasaarada CIyaaraha iyo dhalinyaradu shaacisay in dib loo qaban doono tartankii mudada taagnaa ee Gobolada Jamhuuriyada Somaliland, iyadoo la filayo inuu ka bilowdo bishan aynu ku jirno 27 keeda, hadaba waxaanu arintaasi ka waraysanay gudoomiyaha xidhiidhka kubada cagta Somaliland mudane Maxamed Aamiin Cabdi Cilmi kaas oo ka xog waramay xaalda iyo diyaar garowga ay sameeyeen ka xidhiidh ahaan.
Maxamed Ameen ayaa u xaqiijiyey Wargayska Geeska Afrika inay sameeyeen Diyaar garow badan iyagoo damacsan inay qabtaan tartan ka gadisan kana horumarsan tartanadii hore ee laga qaban jiray wadanka.
Gudoomiye Maxamed Aamiin oo arintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: “waxaanu samaynay diyaar garow badan, gudida qaban-qaabda ciyaaraha Jsl si fican ayaanu ugu diyaar garoobaynaa tartankan, waxaanu u shirnaa si joogto ah, subaxii ilaa 3 galabnimo ayaanu ku gaadhnaa shirarka aanu galno”.
Dhanka kale gudoomiye Aamiin oo ka hadlay siday u casriyeynayaan koobkan iyo sida uu kaga duwanaan doono kuwii hore waxa uu yidhi: “tartankani waxa uu noqon doonaa mid casriya, oo hiigsan doona kuwa caalamka iyadoo aad lasocotaan dib u habaynta lagu sameeyey garoonka Stadiumka Hargeysa”.
Ugu dambayn waxa uu gudoomiyuhu u diray fariin ciyaar yahanada ka qayb galaya koobka Goboloda S/Land waxaanu yidhi: “ dhamaan ciyaartoyga ka qayb qaadanaya koobka Gobolada S/Land haday tahay kubada cagta, kubada kolayga iyo Orodyahanda waxaan ku boorinayaa inay diyaar garoobaan sidoo kalena ilaaliyaan anshaxa iyo akhlaaqda kuna dadaalaan inay noqdaan kuwo lagu daydo”.